Kuyeuka Jesu Kristu: Chinoita Kuti Vamwe Vapemberere Krisimasi
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Armenian Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Korean Lingala Lithuanian Malagasy Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Kuyeuka Jesu Kristu
“Rambai muchiita izvi muchindiyeuka.”—RUKA 22:19.
Chinoita kuti vamwe vapemberere Krisimasi.
Vamwe vanoti Krisimasi ndeyokupemberera kuberekwa kwaJesu kwete kungopanana zvipo nokufara chete.
Sei vachitadza kubudirira?
Nziyo dzakakurumbira dzeKrisimasi netsika dzinoitwa panguva yacho hazvinei naJesu Kristu. Mamiriyoni evanhu vanopemberera zororo racho haatendi muna Jesu uye vamwe havatombotendi kuti akararama pasi pano. Vaya vanoita zvokutengesa vanotora Krisimasi sezororo rokuti vashambadze zvavanotengesa kwete rokuyeuka Jesu.
Ndezvipi zvinotaurwa neBhaibheri zvingabatsira?
‘Mwanakomana womunhu akauya kuzopa mweya wake kuti uve rudzikinuro mukutsinhana nevazhinji.’ (Mako 10:45) Hapana mubvunzo kuti Jesu haana kutaura mashoko ari patangira nyaya ino pazuva raakaberekwa asi usiku hwakazoteverwa nokufa kwake. Usiku ihwohwo, Jesu akapa mirayiridzo yezvaizofanira kuitwa pakuyeuka rufu rwake. Asi nei Jesu aida kuti vateveri vake vayeuke rufu rwake kwete kuberekwa kwake? Nokuti chibayiro chake chorudzikinuro chinopa vanhu vanoteerera mukana wokuwana upenyu husingaperi. Bhaibheri rinoti: “Mubayiro wechivi ndirwo rufu, asi chipo chinopiwa naMwari achishandisa Kristu Jesu Ishe wedu ndihwo upenyu husingaperi.” (VaRoma 6:23) Saka gore negore panosvika zuva rakafa Jesu Kristu, vateveri vake vanoyeuka rufu rwake vasingafungi nezvake somucheche achangozvarwa asi se“muponesi wenyika.”—Johani 4:42.
“Kristu akakutambudzikirai, achikusiyirai muenzaniso kuti munyatsotevera tsoka dzake.” (1 Petro 2:21) Nzira yakanaka yokuti ukudze uye uyeuke Jesu ndeyokudzidza muenzaniso wake semunhu akanga asina chivi uye akachenjera. Fungawo zvakadzama maratidziro akaita Jesu kuti aiva netsitsi, mwoyo murefu uye ushingi hwokuita zvinhu zvakanaka uye ona kuti ungamutevedzera sei muupenyu hwako.
“Umambo hwenyika hwava umambo hwaShe wedu nohwaKristu wake, uye Iye achatonga samambo nokusingaperi-peri.” (Zvakazarurwa 11:15) Paunoyeuka Jesu Kristu, funga kuti ari kuitei pari zvino. Jesu ari kutonga saMambo kudenga. Shoko raMwari rakaprofita nezvaJesu richiti: “Achatongera vakaderera nokururama, uye achatsiura nokururama nokuda kwevanyoro venyika.” (Isaya 11:4) Pari zvino, Jesu haasi kacheche kachangozvarwa asi Mutongi ane simba anogona kuita zvose izvozvo.
Rudo Nemufaro Panguva yeKrisimasi—Kuyeuka Jesu Kristu
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI Chinhu Chiri Nani Kupfuura Krisimasi
Chinhu Chiri Nani Kupfuura Krisimasi
NHARIREYOMURINDI Chinhu Chiri Nani Kupfuura Krisimasi